MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EYGA SAINT DANE - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada eyga Saint Dane
Saint Bernard / eeyaha waaweyn ee isku dhafan ee eeyaha
Teddy the Saint Bernard / Great Dane mix brew at 4 years with with his cohor xiiro bilaha xagaaga
Saint Dane ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Saint Bernard iyo Daanyeer Weyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
sawirada eeyaha yaryar ee alaskan husky
Bella the Saint Dane markay jirtay 19 bilood— 'Bella waa eey aad u dabeecad wanaagsan oo jecel inuu ciyaaro oo uu sii socdo socdo . Waqtiyada badankood, iyadu ma ogaato iyada cabir , iyo markay u soo foorarsato habsiin, ama si ay habsiiso, waxay ku saabsan tahay inay ku garaacdo. Waxay ku fiican tahay carruurta iyo dadka kale ee waaweyn, waxayna jeceshahay inay noqoto bartamaha dareenka. Iyadu waa mid aad u ilaaliya, oo daacad ah, oo aad ugu fiican leh bisadaha . Bella miisaankeedu wuxuu gaarayaa 135lbs. '
Harley (Mid ka mid ah Xena iyo Gunner wiilashiisa) da'doodu tahay 3 sano, miisaankiisuna yahay 185 lbs.
Gunner (lab) da'da 4 sano, culeyskiisuna yahay 175 lbs., Sawir qadarin ah East Coast Bernadanes - CKC diiwaangashan
Xena (dhadig) oo 5 sano jir ah, culeyskeeduna yahay 135 lbs., Sawir xushmad leh East Coast Bernadanes - CKC diiwaangashan
Mattingly (Mid ka mid ah gabdhaha Xena iyo Gunner) markay 2 sano jiraan, miisaankeedu yahay 140 lbs., Sawir sawir waxaa iska leh East Coast Bernadanes - CKC diiwaangashan
'Diesel the Great Dane / Saint Bernard mix-aabihiis wuxuu ahaa Dane Weyn hooyadiisna waxay ahayd Saint Bernard. Labada waalidba saafi bay ahaayeen. Waa sagaal bilood jir miisaankiisu ka badan yahay 100 rodol sawirkan. '
Diesel the Great Dane / Saint Bernard mix (Saint Dane) oo ah cunug 10-toddobaad jir ah
'Saint-Bernard / Great Dane puppy puppy-oo afar maalmood jir ah - hooyada magaceeda waa Alaska aabbahana waa Scooby. Labada waalidba waa eeyo qoys oo waawayn oo dadku ku farxaan. Hooyo marwalba way na ogeysiisaa marka duufaan ama khatar ay soo dhowdahay. Waxay leedahay dareen lixaad weyn. Ma sugi karno inaan aragno inta ay yaryari sii kordhayaan. '
Lucas the Great Dane / Saint Bernard mix brey puppy at 4 bilood jir
Lucas the Great Dane / Saint Bernard brey breppy puppy at 5 toddobaad
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Saint Dane
Saint Dane Sawirada 1
Liiska eeyaha Saint Bernard Mix eeha
intee leeg ayuu helayaa shabaq nacnac
macluumaad dheeri ah oo ey caan ah
isku darka lhasa apso iyo chihuahua
buro unugyada feerka
shar pei iyo iskudhafka bulldog ingiriiska